Cinema | TeraNews.net |
Will Smith: akamiririra mudzimai wake - akabhururuka kunze kwemufirimu academy
Klipsch T5 II Yechokwadi Wireless Anc - Premium TWS Earbuds
Yakavharwa yakazara-saizi mahedhifoni Beyerdynamic MMX 150
Uri kutarisa chikamu
TWS mahedhifoni Marshall Motif ANC
Iyo Marshall Motif ANC ndeye TWS mahedhifoni kubva kune inozivikanwa Marshall brand iyo isingade sumo. Vane system ...
BenQ Mobiuz EX3210U Gaming Monitor Ongororo
2021 yanga iri shanduko mumusika wemitambo yekutarisa. Iyo 27-inch standard chinhu chekare. Vatengi zvishoma nezvishoma asi zvechokwadi vakafamba…
Sony WH-XB910N pa-nzeve isina waya mahedhifoni
Mushure mekubuditswa kwakabudirira kweiyo Sony WH-XB900N isina waya mahedhifoni, mugadziri akashanda pabugs uye akaburitsa yakagadziridzwa modhi.…
Hifiman HE-R9 Dynamic Headphones
Yakazara-saizi inochinja mahedhifoni nerutsigiro rweHifiman HE-R9 isina waya module vamiriri vechikamu chePrimum. UYE…
Sennheiser CX Plus Yechokwadi Wireless - mu-nzeve mahedhifoni
Sennheiser CX Plus Yechokwadi Wireless mumiriri wepakati chikamu cheasina waya mu-nzeve mahedhifoni. Unogona kuvafonera...
Audio-Technica ATH-CKS5TW mu-nzeve TWS mahedhifoni
Iyo Audio-Technica ATH-CKS5TW Yechokwadi Wireless In-Ear Headphones inoratidzira yakasarudzika 10mm dual-layer madhiraivha…
TV bhokisi Mecool KM6 Deluxe 2022 - muchidimbu
Kuve mukukanganwa zvachose mushure mekuburitswa kweiyo Ugoos 7 set-yepamusoro bhokisi, pakanga pasina chishuwo chekutarisa vakwikwidzi vazvino. Sei…
Soundbar Hisense HS214 - muchidimbu, zvakatemwa
Iyo Hisense HS2.1 214-channel yakaderera-yekupedzisira soundbar inopa yakadzama kuberekana kwepakati nepamusoro. Uye izvi…
Audio-Technica ATH-M50xBT2 Wireless Headphones
Audio-Technica ATH-M50xBT2 ishanduro yakagadziridzwa yeasina waya vhezheni yeanozivikanwa ATH-M50 mahedhifoni. Zvechikamu chedigital...
Marantz N8006 Network Audio Player
Marantz ND8006 yakavakirwa pakushandiswa kwekuvandudza kwemidziyo yeprimiyamu yakatevedzana. Inosanganisa network yemhando yepamusoro…
Iyo JBL Cinema SB190 soundbar mumiririri wepakati mutengo wepakati uye wepamusoro mutsetse weSB. Chinhu chikuru cheJBL Cinema SB190…
Roku Streaming Stick 4K HDMI Dongle
Roku yakaburitsa yakakwira vhezheni yayo yeHDMI Yekutenderera Stick dongle. Kuvandudza kunosanganisira hardware ine simba. Pane support...
Yakabatanidzwa stereo amplifier Rotel RA-1592MKII
Iyo Rotel RA-1592MKII ndiyo yepamusoro modhi muchikamu che15MKII, ichiburitsa 200W (8Ω) pachiteshi mukirasi AB. Inonzi amplifier...
SMSL DP5 - chizvarwa chinotevera network odhiyo inoridza
SMSL DP5 inomira netiweki inoridza yekutamba maodhiyo mafaira emhando dzakasiyana siyana kubva kwakasiyana masosi. Yakagadzirwa...
DAC/Preamp Topping D30PRO
Topping D30Pro idhijitari-kune-analog inoshandura ine preamp mune imwechete unit. Mudziyo wekuteerera une zvinhu zviviri zvinobuda ne…
DZVANYA ... RATIDZA ZVIMWE ... Hakuna zvimwezve zvawatumira
Flagship Nokia N73 yakaziviswa ine 200 MP kamera
Drone DJI Mini 3 Pro inorema 249 magiramu uye inotonhorera optics
Samsung Pro Endurance microSD yekurekodha vhidhiyo
Izvo zvichave nyore kutenga smartphone ine inopisa mufananidzo uye MIL-STD-810H
Land Rover Dziviriro 2020: iyo Dutu reSVV idzva
Hydromassage madziva - ndeapi, nei, ndeapi mutsauko
Chishamiso paCornuson: A321 emergency landning
TV bhokisi TiVo Bolt: ongorora, zvakatemwa, wongororo
TV-bhokisi nVidia Shield TV Pro 2019: ongorora, zvakatemwa
© 2022 - Teranews. All rights rights rights rights rights rights rights
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetera mushandisi mvumo yemakuki ari muchikamu "Analytics".
cookielawinfo-cheki bhokisi-rinoshanda 11 mwedzi Iyo cookie yakagadzwa neGDPR cookie mvumo yekurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Anoshanda".
cookielawinfo-chebhokisi-Zvakakodzera 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Makuki anoshandiswa kuchengetera mushandisi mvumo yemakuki ari muchikamu "Zvakakodzera".
cookielawinfo-checkbox-vamwe 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Zvimwe.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin. Iyo cookie inoshandiswa kuchengetera mushandisi mvumo yemakuki ari muchikamu "Performance".
yakatarisa_cookie_policy 11 mwedzi Iyo cookie yakagadzwa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin uye inoshandiswa kuchengetera kana kwete kana mushandisi akabvuma kushandiswa kwemakuki. Izvo hazvichengetedze chero epamoyo data.
Anoshanda makuki anobatsira kuita mamwe mashandiro sekugovana zvirimo muwebhusaiti pane eruzhinji midhiya mapuratifomu, kuunganidza feedbacks, uye zvimwe zvechitatu-bato maficha.
Performance makuki anoshandiswa kunzwisisa uye kuongorora akakosha mashandiro indekisi yewebhusaiti iyo inobatsira mukuendesa zvirinani mushandisi ruzivo kune vashanyi.
Mamwe makuki asina kukamurwa ndeaya ari kuongororwa uye asati aiswa muchikamu parizvino.